Birmingham Metropolitan College oo ka noqday go’aankii uu ku mamnuucay xijaabka. | Salaan Media
Birmingham Metropolitan College oo ka noqday go’aankii uu ku mamnuucay xijaabka.
Machad ama dugsi u sheegay ardaydiisa in la faydo wajiga iyo madaxa oo aan la daboolin inta dugsiga la joogo, iyada oo uu ku jiro xijaabka diiniga ah, sababo ammaan awgeed ayaana arrintaa loo cuskaday, waxase la baddalay siyaasaddii taa ku wajahnayd.
Machadka Birmingham Metropolitan oo asal ahaan sheegay in ardayda ay mamnuuc ka tahay koofidha la isku daboolo ( hoodies ), Koofiyadaha kale noocyadooda iyo xijaabka, si bay yidhaadeen ay u fududaato in la garto qofka dugsiga dhex jooga,
Madax bannayntan ayaa waxa taageerayey David Cameron.
Laakiin immiga waxa la go’aamiyey in la casriyeeyo qaabka loo xidhanayo si shakhsiyaadka raba loogu oggolaado in ay xidhaan ‘ waxyaal muujinaya in ay ka tarjumayaan qiimaha dhaqankooda’
Bayaan ayaana lagu sheegay in la ” casriyeyeeyo” siyaasadda arrintan la xidhiidha, waxa uu bayaankaasi yidhi. ‘ Waxan tixgelinaynaa arrintan ay saxaafaddu ahmiyadda siisay, ee qulquladaysay mooshinkii aan wax kaga qabanaynay sidii aan kor ugu qaadi lahayn tayada waxbarasha’.
Afhayeenka Mr Cameron ayaa isna tibaaxay in Ra’iisal wasaaruhu uu wakhti hore rumaysnaa in dugsiyadu ay awood u yeeshaan ka talinta siyaasadda dirayska dugsiga lagu xidhanayo.. ” Muhimadduna waa taasi midka aan u taageerno dugsiyada si ay u awoodaan ka tashiga siyaasadda dugsiga ee dirays qaadashada ah.”
Ku xigeenka Ra’iisal Wasaaraha Ingiriiska Nick Clegg ayaa isna sheegay ” ma fududa ” in la mamnuucaa.
Waana wax aad u adag in la iska mamnuuco xidhashada xijaabka.
Dhinaca dugsiga sharcigan la yimid ayaa isna soo saaray bayaan kooban, waxa uu u qornaa sidan:
“Waan dhageysanaynaa aragtiyada amma ra’yiga ardaydayada waanan ku kalsoonnahay casriyeyntan marka aan eegno siyaasaddayada, waanan tixgelinaynaa baahida dhammaan ardaydayada”.